'मेरो उपचारमा थोरै रकम अभाब छ, सक्नेले सहयोग गर्दिनु, नसके शेयर गर्दिनु, मेरो सम्पर्क न तल छ,' -
चोखो मनले लाइक गर्नुहोस सेयर गर्नुहोस तपाइको भाग्य चम्किनेछ नागको अन्डा देख्ने मान्छे भाग्यमानी हुनेछ।
शुभ बिहानी 💘💘आज मिति २०७६ कार्तिक २६ गते मंगलबारको राशिफल पढी शेयर गर्नुहोस।
‘मेरो उपचारमा थोरै रकम अभाब छ, सक्नेले सहयोग गर्दिनु, नसके शेयर गर्दिनु, मेरो सम्पर्क न तल छ,’
१९ फाल्गुन २०७५, आईतवार ०४:३७ March 3, 2019 GS Nepalस्वास्थ्यNo Comment on ‘मेरो उपचारमा थोरै रकम अभाब छ, सक्नेले सहयोग गर्दिनु, नसके शेयर गर्दिनु, मेरो सम्पर्क न तल छ,’
कठै ! दैव पनि कति निष्ठुरी ! खाउखाउ लाउलाउ भन्ने उमेरमा छारेरोगले सतायो राधिका राईलाई। उनलाई पनि अरु साथी सरह पढ्न मन थियो होला, साथी भाईसँग खेल्न मन थियो होला, तर उनको रोगको कारणले गर्दा उनले बाल्यकालको त्यो रहर अनि सुखद पललाई समेत मन भित्रै मार्नु पर्यो उनले । अहिले उनी २४ वर्ष कि भइन्। बाल्यकाल देखि लागेको यो रोगले उनलाई अहिले सम्म सताइरहेको छ। छारेरोगले उनको साथ स्वासले झैँ आजको दिन सम्म पनि छोडेको छैन।
बाल्यकाल देखि नै राधिका जहाँ बस्यो त्यही पत्तै नपाई एक्कासी ढल्ने गर्थिन्। ज छारे रोगले च्याप्थ्यो तब उनलाई केहि कुराको पनि होस् हुदैनथ्यो। उनी बेहोस हुने, काम्ने, मुखबाट फिज काट्ने गर्थिन्। त्यसैले उनलाई एक्लो छोड्नु भनेको जानी जानी मृत्युको मुखमा धकेली दिनु जस्तै हो। छारे रोग निको पार्न राधिका राइका बुवाआमा मच्छीन्द्र राई र रमला राईले आफुले जानेको बुझेको सबै गरे। तर परिवारको प्रयास सफल हुन सकेन।
त्यस्तै आज भन्दा ५ वर्ष अघि छारे रोगकै कारण ढल्दा दुर्भाग्यवश उनी आगोमा ढल्न पुगिन्। त्यतिबेला उनको दाहिने हातको आधा भाग काट्नु पर्यो। जब हात काटियो उनको जिन्दगी अन्धकारमय बन्यो । एक पटक आगो पानीमा परिसके पछि छारे रोग उपचार गर्दा पनि निको नहुने अन्धविश्वासका कारण उनको परिवारले राधिकाको छारेरोगको उपचार गर्न समेत छोडेका थिए।
राधिकाको दिनचर्या यसरी नै छारेरोग सँग जुध्दै/लड्दै बितिरहेको थियो । १० दिन अघि अचानक उनको जीवनमा फेरी अर्को दु:खद पिडा थपियो । त्यहि छारेरोगले उनी फेरी आगोमा जल्न पुगिन। यो पटक आगोमा पर्दा भने उनले भुवादार ज्याकेट लगाएकी थिइन्। आगोमा जल्दा भुवा समेत जलेर उनको शरीरको अंगमा टासिन पुग्यो।
त्यसबेला घरमा उनी एक्लै थिईन् । उनी जलिरहिन्, चिच्चाई रहिन् तर उनको चित्कार सुन्ने त्यो बेला कोहि भएनन । आमा बुबा आए पछि छोरी आगोमा परेको देखेर आमाबुबाको होसहवास उड्यो । उनी अझै आगोमा नै थिईन्। हत्त न पत्त छोरीलाई उठाएर उनीहरुले धरानस्थित घोपा अस्पताल लगे । घोपा अस्पतालबाट भोलिपल्ट साँखुस्थित सुस्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा पठाईयो।
त्यतिबेला सम्म उनको भएको आधा हात पनि काट्नु पर्ने अवस्था सृजना भइसकेको थियो । रुँदा रुँदै आँखाको आशु सुक्यो तर दु::ख र पिडा भने अलिकति पनि कम भएन । भाग्यको पनि कस्तो लेखान्त आमाबुवाको सहारा बन्न बसेकी उनको फेरी पनि बाँकी भएको आधा हात पनि काटेर फाल्नु पर्ने अवस्था आयो।
डाक्टरले तत्काल अप्रेसन गर्नुपर्ने बताए पनि पैसाको अभावका कारण आज गर्ने भनिएको अप्रेशन रोकिएको छ। परिवारको सहमतिमा सोमबारको लागि अप्रेसनको मिति सारियो। यदि राधिकाको परिवारले उनको अप्रेशनको लागि सोमबार अगावै पैसा जुटाउन सके भने मात्रै उनको अप्रेसन हुने सम्भव छ अन्यथा उनको उपचार नहुने भएको छ। तपाई हाम्रो धेरथोर सहयोगले कसैको जीवनमा आशाको किरण आउँन सक्छ भने किन सहयोग नगर्ने ? आउनुहोस् सहयोग हात अगाडी बढाउ। कृपया आफुले सकेको सहयोग गरेर राधिका राईको जीवन बचाईदिनु हुन पिएनपी मिडियाको तर्फमार्फत विनम्र अनुरोध गर्दछौ। सहयोग गर्न चाहाने सहयोगी मनले राधिकाको मोबाइल नम्बर ९८२३७०८६२५ मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ।
छोरी पाएपछी श्रीमान भागे , १० दिनको सुत्केरी दिन भर भोकभोकै , कृपया पूरा पढी शेयर गर्दिनु होला।
२४ श्रावण २०७६, शुक्रबार १०:२४
बा*थ रो*ग के हो,कसरी लाग्छ, र कसरि औसधि उपचार गर्ने!! जानी राखौं ।
९ श्रावण २०७६, बिहीबार ००:५८
भुलेर पनि धेरै नखानुस यी खानेकुरा ! जसले स्मरण शक्ति घटाउन सक्छ।
९ श्रावण २०७६, बिहीबार ००:२३
महाशिबरात्रीमा गाजा ब्यापार र सेवन रोक लगाए पछि पशुपतिमा बाबा र जोगि घटे
श्रीमान बितेको ५ दिन नबित्दै रबिन्द्र पत्निले गरिन यस्तो घोषणा , पूरा पढेर मात्रै कमेन्ट गर्नुहोला।
२६ कार्तिक २०७६, मंगलवार २२:०७
२६ कार्तिक २०७६, मंगलवार १०:५४
२५ कार्तिक २०७६, सोमबार २०:३६
शुभ बिहानी 💘💘आज मिति २०७६ कार्तिक २७ गते बुधबार तपाईंको आजको राशिफल पढी शे'यर गर्नुहोस।
'सम्झौता र मित्रताका नाममा नेपाल कदापी झुक्नु हुदैन' भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई मा'ओवादी पुर्बलडाकुको खुल्लापत्र,
कमला घिमिरेको पुजारी बाजे सङ्ग पर्यो दोहोरी घम्साघम्सी,कस्ले जित्यो त(हेर्नुस् भिडियो )